ရန်ကုန်မြို့မှ မယ်မြန်မာ၊ မောင်မြန်မာ ပြိုင်ပွဲများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ရန်ကုန်မြို့မှ မယ်မြန်မာ၊ မောင်မြန်မာ ပြိုင်ပွဲများ
ရန်ကုန်မြို့မှ မယ်မြန်မာ၊ မောင်မြန်မာ ပြိုင်ပွဲများ
Posted by ဂျစ်စူ on Jul 3, 2011 in Copy/Paste | 15 comments
Ngu War Khine, the winner of the Miss Myanmar contest, poses for photos after the event organized by the Myanmar Bodybuilding Federation at Myanmar Convention Center (MCC) Saturday, July 2, 2011, in Yangon, Myanmar. The beauty pageant was held along with the Mister Myanmar competition sponsored by the same organizer. (AP Photo/Khin Maung Win
ဇူလိုင် ၃၊ ၂၀၁၁
Contestants stand on the stage during the Miss Myanmar pageant organized by the Myanmar Bodybuilding Federation at Myanmar Convention Center (MCC) Saturday, July 2, 2011, in Yangon, Myanmar. The beauty pageant was held along with the Mister Myanmar competition sponsored by the same organizer. (AP Photo/Khin Maung Win)
Myanmar bodybuilders strikeapose during the Mister Myanmar competition organized by the Myanmar Bodybuilding Federation at Myanmar Convention Center (MCC) Saturday, July 2, 2011 in Yangon, Myanmar. (AP Photo/Khin Maung Win)
Myanmar bodybuilders strikeapose during the Mister Myanmar competition organized by the Myanmar Bodybuilding Federation at Myanmar Convention Center (MCC) Saturday, July 2, 2011 in Yangon, Myanmar. (AP Photo/Khin Maung Win) A Myanmar bodybuilder strikesapose during the Mister Myanmar competition organized by the Myanmar Bodybuilding Federation at Myanmar Convention Center (MCC) Saturday, July 2, 2011 in Yangon, Myanmar. (AP Photo/Khin Maung Win)
Credit to AP,Moemakha media
မယ်မြန်မာ တွေက လှ ကြပါတယ် ။ မောင်မြန်မာ တွေကတော့ အင်း… လှဖို့အတော်ဖြစ်ညှစ်ထုတ် နေရသလား လို့ ။ ဟီဟိ ။
မယ်မြန်မာတွေက ဘော်ဒီလေးတွေ လှပေမဲ့ မျက်နှာတွေကျတော့ … မလန်းဘူး ဖြစ်နေတယ် … ။
မောင်မြန်မာတွေမြင်ရတာ သောက်နေတဲ့ ကော်ဖီတောင် ဆက်မသောက်ချင်တော့ဘူး .. အဆီတ၀င်းဝင်းနဲ့ … စီပီ ကြက်ကြော်ထက်ဆီများတယ် ။
(မယ်မြန်မာတွေလည်း တို့လောက်တောင် မလှပါလားနော်..ဤကား စကားချပ်)
အပေါ်ဆုံးက မယ်ငုဝါခိုင် ပါ
အောက်ဆုံးပုံက အကိုကြီး ပြုံးပြနေတာလဲ ဘလောက်ချစ်ဖို့ ကောင်းလဲ
ကျုပ်တို့အဖိုးကြီးမျက်လုံးနဲ့တော့ အ၀တ်အစားဒီဇိုင်းတွေက ရိုးလွန်းတယ် …။ ၁၉၅၄ လောက်က
မယ်မြန်မာ လေး တွေ ကို အနီးကပ် ရိုက်ထားတဲ့ ပုံလေးတွေ များ မရှိဘူးလား ကိုပေါက်ဖော် ရေ ။
လောလောဆယ် ဒီပုံတွေပဲတွေ့ လို့ ..ပါ..
နောက်နှစ်မှ အနီးကပ် ရိုက်ပြပါ့မယ်..မယ်လှလှလေးတွေ ရှာပြီး
နောက်ကို မယ်ပုံတွေလောက်ပဲတင်ပါ ရပါတယ်။
အီးတုံး ပြောသလိုပဲ ကြည့်ရတာ စိတ်ပျက်စရာမို့။
မယ်တွေက မလန်းဘူး။ ၆ ၇ ၈ တွေက ပုတိုတိုနဲ့။
၉ ကတော့ အရပ်ရှည်ပြီး ကိုယ်လုံးလှပေမယ့် ဗိုက်ကလေးတော့ ပူနေတယ်။
ကျန်တာတွေက နည်းနည်း ဝါး လို့ မဝေဖန်တော့ပါဘူး။
မယ်လေးတွေက တော့ မဆိုးပါဘူး
မောင်တွေကတော့ ကြွက်သားတွေညှစ်ပြနေတာကလဲ မသက်တာပါလား
နံပါတ် ၁၀ ၀တ်ထားတာ ဗီယမ်နာမ် ပိတ်စ..
အခု တလော အဲဒီ ဗီယမ်နာမ် အစ တွေ တော်တော် ခေတ်စားနေကြတယ်။
မြန်မာ ဒီဇိုင်းတွေ တစ်ခေတ်ဆန်းလာတာ ကောင်းသော တိုးတက်မှုပါပဲ။
အောက်ဆုံးက ရီပြနေတဲ့ အကိုကြီးကတော့ ညဖက် သရဲမကြောက်အောင် ကလေးတွေကို ပြထားလို့ရတာပေ့ါ။
မယ်မြန်မာတွေကိုကြည့်လိုက်ပြန်ရင်လဲ မလေးစုန်းမကမှ မျက်နှာချိုသေးဘယ့်နှယ်ဗျာ
ရူပါက ချူချာလိုက်တာ လွန်ရော